Yoda, Character Sculpting. - VERTEX ANIMATION STUDIO
Blender Sculpting Course Video Tutorials
Sculpting Course သင်တန်း တက် ရောက်ထားသူ များသာ ကြည့်ရှု နိုင်ပါမယ်။ သင်တန်း တက်စဉ်က သုံးထား
Video Lessons များ၀ယ် ယူရန်
Yoda, Character Sculpting.
Difficulty level : Advance level​
ဒီ Lessons video များမှာတော့ Character တကိုယ်လုံးကို အစအဆုံး Blednder Sculpting နဲ့ ဖန်တီး ပြထားပါတယ်၊ Point ( Vertex ) တခုမှ အစပြုကာ Character တခုလုံးကို ဖန်းတီး ပုံ အဆင့်ဆင့် ကို မြန်မာ လိုရှင်းပြထားသော Video များနဲ့ တဆင့်ချင်း သင်ပေးထားပါတယ်။
ခု သင်ခန်းစာများမှာ Blender sculpting နည်းစနစ်များ၊ စက်မလေးအောင် model ကို Mask ပြုလုပ် ခွဲထုတ် ပြီး တပိုင်းချင်း Detail ဆွဲပုံများ၊ model တခုလုံးကို Retopo ပြုလုပ်ပြီး Detail ပြန်ရအောင် Reproject ပြုလုပ်ပုံ၊ Normal map, Displacement map ထုတ်ပုံ၊ Texture painting, UV unwraping, Cloth Sculpting, Hair creation, Lighting and Render စသည်တို့ကို ပြည့်စုံစွာ သင်ကြားပေးထားပါတယ်။
Lesson 01 ( Click here for download )
Click here for download reference photo and Yoda textures
​ဒီ သင်ခန်းစာမှာ Point ( vertex ) တခုမှ နေပြီး တကိုယ်လုံး အတွက် Basemesh ပြုလုပ်ပုံ ကို သင်ပေးထားပါတယ်။ Base mesh ကို Sculpt mode သို့ ပြောင်းပြီး ပုံကြမ်း ပေါ် အောင် စတင် ဖန်တီး ပါတယ်။
Lesson 02 ( Click here for download )
​Base mesh ကနေပြီးတော့ Dyntopo mode ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံကြမ်း ထွက်အောင် Sculpting စတင်ပြုလုပ်ပါတယ်၊ Blender sculpting နည်းစနစ်များနဲ့ Brush များကို ပြုပြင်ပြီးသုံနည်း များကိုလည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။
Lesson 03 ( Click here for download )
​Model ကို စက်မလေး အောင်အတွက် Mask ပြုလုပ်ခါ အပိုင်းများ ခွဲပါတယ်။ တပိုင်းချင်းစီကို Detail များထပ်မံ Sculpting ပြုလုပ်ပါတယ်။
Lesson 04 ( Click here for download )
ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းများကို ဆွဲတဲ့ အခါ မြန်အောင် အတွက် လက်ချောင်း တခုကိုဖန်တီး ပြီး လက်ချောင်းများ copy ကူးကာ ပြန်ထည့်နည်း သင်ပေးထားပါတယ်။
Lesson 05 ( Click here for download )
​Lesson 05 to 08 သည် Retopo Lessons များဖြစ်ပါတယ်။ ယခု Lessons များကို မလေ့ကျင့်ခင်မှာ Alien portrait retopo lessons များကို အရင် လေ့ကျင့်ပါ။ Alien portrait retopo မှာ add on မသုံးပဲ သင်ထားပါတယ်။ ​ပိုပြီး basic ကျပါတယ်။
ခု lessons များက speed retopo ဆိုတဲ့ add on ကို သုံးထားပါတယ် ။ Add on ကိုလည်း ပေးထားပါတယ်။
Yoda retopo Lessons များက ပို အဆင့်မြင့်ပါတယ်။ တခါမှ retopo မလုပ်ဖူးသူများ အခက်အခဲ ရှိနိုင်သော ကြောင့် Alien portrait retopo ကို အရင် လေ့ကျင့်ပါ။ ကြည့် ရုံပဲ ကြည့်လို့ မရပါ လေ့ကျင့်မှ ရပါမယ်။
Yoda retopo lesson များကိုလည်း သေချာကြည့်ပါ။ ကျော် မကြည့်ပါနဲ့ retopo လုပ်ရင် လွယ်အောင် ဆရာအရေး ကြီးတဲ့ အချက် အများကြီး သင်ပေးထားပါတယ်။ Animation လုပ်လိုသူများ ၊ game company များမှာ လုပ်လိုသူများ retopo လုပ်တပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Sofware က လုပ်ပေးတဲ့ Retopo က သုံးလို့ မရပါဘူး ၊ ခုလိုမျိုး manual အမြဲတမ်း ပြုလုပ်ရပါတယ်။ ​
Lesson 06 ( Click here for download )
Lesson 07 ( Click here for download )
Lesson 08 ( Click here for download )
Lesson 09 ( Click here for download )
​Retopo ပြုလုပ်ပြီး ပါးစပ်အတွင်းပိုင်း ပြုလုပ်ပုံ၊
Reproject ပြုလုပ်ပြီး Detail ပြန်ရအောင် ပြုလုပ်နည်း၊
Detail များထပ် ဖန်တီးနိုင်အောင် alpha Brush ပြုလုပ် နည်းတို့ကိုသင်ပေးထားပါတယ်။
Lesson 10 ( Click here for download )
Yoda model detail များကို ‌alpha brush ဖြင့် ဖန်တီးခြင်း။
Lesson 11 ( Click here for download )
ရိုးရို Brush , alpha brush များဖြင့် detail များ ထပ်မံ ထည့် သွင်းခြင်း၊
Primary , secondary, tertiary ဆိုပြီး ၃ ကြိမ် ​ပြည့်အောင် Detail ထည့်သွင်း ပေးပါ။
Lesson 12 ( Click here for download )
​Yoda model ကို unwrap ပြုလုပ်ခြင်း၊ mdoeling error များကို correct ပြုလုပ်ခြင်း၊ Seam line များတွင် ဆက်ရာ မပေါ် အောင် ပြုလုပ်ခြင်း နည်း စနစ်များ သင်ပေးထားပါတယ်။
Lesson 13 ( Click here for download )
​Model တကိုယ်လုံးကို detail များထည့်ခြင်း၊ စက် မလေး ရအောင် model ကို အပိုင်းများခွဲပြီး detail ထည့်ပါတယ်။ Detail ထည့်ပြီးပါက ဆက်ရာ မပေါ် အောင် ပြန် ဆက်နည်းကိုလဲ ပြထားပါတယ်။
Lesson 14 ( Click here for download)
​High resolution model မှ normal map , displacement map များထုတ် ယူခြင်း သင်ခန်းစာများ။
Lesson 15 ( Click here for download )
​Eye texture ကိုphotoshop ဖြင့် ဖန်တီးပြီး၊ Body texture ကို painting စလုပ် ပုံ။
Lesson 16 ( Click here for download)
​Painting နည်းစနစ်များ နဲ့ Detail paint များကို တလွာချင်း painting ပြုလုပ်ပုံ သင်ခန်းစာများ
Lesson 17 ( Click here for download)
​3D print လုပ်လို သူများ အတွက် 3D print အတွက် export ထုတ်ရန် ပြင်ဆင်နည်းများ၊
Skin painting အတွက် လိုအပ်သော sss map, specular , glossy map , များ ပြုလုပ်နည်း များ။
Lesson 18 ( Click here for download)
Skin paint for specular map and glossy.
Lesson 19 ( Click here for download)
​bone sytem ကို မသုံးပဲ masking နဲ့ posing ပြုလုပ်နည်း။
ခေါင်းစွတ် ပါသော အပေါ် coat ပြုလုပ်ခြင်း။
Lesson 20 ( Click here for download)
​Cloth Brush , Cloth simulation နည်းစနစ် နှစ်မျိုး စလုံးကို အသုံးပြုပြီး ၊ အပေါ် ရုံ အင်္ကျီ ကိုဖန်တီးခြင်း။
Lesson 21 ( click here for download)
​ဒုတ်ကောက်ဆွဲခြင်း၊ ကြိုးဆွဲ ခြင်း၊ အဝတ်အစားများ Textrue ထည့်သွင်းခြင်း စသည်တို့ ကို သင်ထားပါတယ်။
Lesson 22 ( Click here for download)
​Environment map ထည့်ခြင်း၊ Lighting ချိန်ခြင်း၊ ဆံပင်များကို hair particle system ဖြင့် ထည့်သွင်းနည်းများ ကို သင်ပေးထားပါတယ်။
Lesson 23 ( Click here for download)
​ခု lesson တွေမှာ high quality render အတွက် blender render setting များကို ပြုပြင်ခြင်းများ၊
Render passess များအကြောင်းနဲ့ အသုံးပြုပုံများအကြောင်း၊
Render layers များကို Save နည်းများ။
Render passes များကို အသုံးပြုပြီး Final ဓါတ်ပုံ ပြုလုပ် ခြင်းနည်းစနစ်များကို သင်ပေးထားပါတယ်။
3D Render Before editing
3D Render After editing